News | Ck raut
News | Tag: Ck raut
अब सिके राउतको पार्टीको नाम ‘जनमत पार्टी’
काठमाडौँ । केही समयअघि सरकारसँग ११ बुँदे राजनीतिक सहमति गरेका सिके राउतको पार्टीको नाम परिवर्तन भएको छ । यसअघि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको रहेकोमा सोमबार सिराहामा सम्पन राष्ट्रिय परिषद बैठकले पार्टीको नाम ‘जनमत पार्टी’ राख्ने निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकले पार्टीको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिसमेत निर्वाचित गरेको छ । पार्टीको अध्यक्षमा डा सिके राउत रहेका छन् भने ३४ जना सदस्य छन् ।
सीके राउतसँग गरिएकाे सहमतिकाे अपव्याख्या भयाे : साेमप्रसाद पाण्डे
काठमाडौँ । तत्कालीन राजनीतिक वार्ता टोली संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले सरकार र चन्द्रकान्त (सीके) राउतसँग गरिएको ११ बुँदे सहमतिलाई अपव्याख्या गरिएको बताएका छन् । सम्वाद चौतारीले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले सहमतिको बुँदा नं. २ मा उल्लेख गरिएको जनअभिमत शब्दलाई अपव्याख्या गरेर जनमत सङ्ग्रह बनाइएको बताए ।
यस्ताे छ सरकार र सीके राउतबीच भएकाे ११ बुँदे सहमति
काठमाडौँ । सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच आज ११ बुँदे सम्झौता भएको छ । राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार आयोजित राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा सरकार र गठबन्धनबीच भएको सहमति सार्वजनिक गरिएको हो । सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र गठबन्धनका तर्फबाट गठबन्धनका संयोजक सीके राउतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सीके राउत दह्राे मुटु भएका राजनीतिक चिन्तक : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीके राउतसँग राजनीतिक चिन्तक समेत भएको बताएका छन् । नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राउत दह्रो मुटु भएका चिन्तक भएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले १० वर्षे जनयुद्ध, युद्धविराम, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकता प्रचण्डले सानो मुटुले नगरेको बताउँदै सीके राउतले पनि सोही लक्षण देखाएको बताए ।
विखण्डनकाे मुद्दा त्याग्दै सीके राउत, प्रधानमन्त्री ओलीसँग एउटै मञ्चबाट सम्बाेधन गर्ने
काठमाडौँ । तराई मधेशमा अलग्गै राज्यको माग राख्दै विखण्डकारी अभिव्यक्ति दिदैँ आएका सीके राउतले देश टुक्र्याउने अभियान त्याग्ने भएका छन् । शुक्रबार दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा राउतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग एउटै मञ्चमा सम्बोधन गर्दै मुलधारको राजनीति थाल्ने घोषणा गर्ने भएका हुन् । राउतका सहयोगी डा. विनय पञ्जियारले राउत विखण्डनको राजनीति छाडेर मुलधारको राजनीतिमा समाहित हुने पुष्टि गरे ।
राउत र चन्दप्रति सरकार कठोर
काठमाडौं । सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) प्रति सरकार पछिल्ले समयमा कठोर बनेको छ । मुलुक बिखण्डनको एजेन्डा बोक्ने राउत र विध्वंस्तामक कार्यमा संलग्न भएको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा मओवादीप्रति सरकार कडा देखिएको हो ।
तराई टुक्र्याउने यस्तो रहेछ योजना
काठमाडौं । राज्यविरुद्ध अपराध गरेको आरोपमा रौतहट कारागारमा रहेका सिके रावतलाई थुनामै पठाउने या रिहा गर्ने भन्ने निक्र्योलमा पुग्नुअघि यस प्रकरणको पेनड्राइभ झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । के छ त्यसमा ? कौतुहलतको विषय बन्ने नै भयो । पाठकवृन्द, उक्त पेनड्राइभमा रहेको महत्वपूर्ण दस्ताबेज जनआस्थाले फेला पारको छ ।